Fikradda naqshadaynta jimicsiga 24 ee ugu fiican ee ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
Fikradda naqshadaynta jimicsiga 24 ee ugu fiican ee ragga iyo dumarka
Tattoo vintage mid ka mid ah naqshadaha sawirada dhifdhiska ah ee aad abid arki karto qof kasta. Waa dhif iyo qurux badan waxayna amar ku bixisaa ixtiraam badan. Haddii aadan hubin naqshadda aad ku socoto jirkaaga, sameyso go'aan ku saabsan naqshadda naqshadeynta ee aad raadineyso.
1. Vintage Tattoo jidhka
2. Ninka Vintage Tattoo
Marka ugu horeysa ee tattoo ah #vintage waa guul weyn oo aad nolosha; Qofna kuma arag adiga oo aan dib u eegin maqaarkaaga.
3. Tattoo qoob-ka-ciyaarka ah
Noocyada noocaan ah ee sheekada "legendary #tattoo" waxaa kaliya lagu arki karaa meydka rag iyo dumar weyn. Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadinayso wax aan caadi ahayn, u tag mid ka mid ah naqshadeynta.
4. Tattoo Real
Helitaanka tattoo vintage waa wax in qaadan qiyaasta waqti badan. Waa inaad sameysid dulqaad haddii aad ka fekereyso tattoo qalabka.
5. Tattoo caleenta caleenta ah
Ugu horreyntii waxay dhajisey dharbaaxo wax uun oo keliya dad yar oo awood u leh inay helaan. Maanta, # dukumiinti waa mid aan la garanayn, qof kastana wuu awoodaa inuu helo isaga oo aan meel ka helin.
6. Tattoo fudud oo fudud
Naqshadeynta tattoo-gaaga fudud ayaa aad u qurux badan. Waad ku mahadsan tahay tattooistayaasha had iyo jeer kuugu jira adiga naqshadaha gaarka ah.
7. Tattoo jimicsiga
Inkasta oo ay xaqiiq tahay in ay adagtahay in la sameeyo qaabka iyo sawirada, quruxda la socota waxa weeye wax keliya oo la gashan karo.
8. Tattoo gabadha lamaanaha ah
Lammaanayaashu waxay leeyihiin fursado ah inay yeeshaan naqshado u eg sida tan. Sidee u aragtaa lamaanahan kuwaas oo naqshadeeyey heerkooda kale?
9. Tattoo qurux badan
Markaad raadineyso meel aad ku sameysid tattoo-gaaga, waa in aad had iyo jeer hubisaa in dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay in aad qabato qaab qurxoon oo tintoo qabooj ah ayaa diyaar kuu ah.
10. Tattoo vintage vintage yaab leh
Haddii aanad weli arkeynin meesha naqshadeynta sawirada casriga ah ee la isku sawiro, waxaad u baahan tahay inaad heshid istuudiyo fiican oo aad ku habayn kartid naqshad noocan ah.
11. Tattoo qurux badan
Stüdyo kasta wuxuu heli karaa meel khaas ah oo aad ka heli karto nooca tattoo weyn. Markaad ka fekereyso meel aad ka heli kartid jirkaaga, fiiri tattoo qalabkaas oo aad u habeyso adigaaga.
12. Tartanka sawir-celinta
Xitaa muuqaal sawir oo kaliya ayaa si fiican u eegi kara naqshadeynta tintooh. Markaad haysato tattooist waxaad ku dhejin kartaa sawir, waxaad ku jirtaa meesha saxda ah
13. Tattoo-ga jirka oo buuxa
Waxay qaadan kartaa maalmo ama xitaa toddobaadyo si aad u hesho tattoo jirka oo dhan sida tan iyo markaad diyaar u tahay naqshadeynta, qof walba waa mid aad u faraxsan.
15. Tattoo-ga qoyska
Waxaa jira istuudiyo badan oo taraawe ah oo kaa caawin doona qaababka sawir-celinta qoyska. Qiimaha helitaanka waxaa laga yaabaa inaanay aheyn mid aad u liidata maaddaama dadka intooda badan ay ka fekeri karaan. Maxkamad ayaa kaliya ku qancin karta.
16. Tattoo qurux badan
Tattoo dharka dumarku waa wax aad jeceshahay inaad muujiso. Waa qurux iyo yaab.
17. Jacaylka tattoo jaceylka
Qof kastaa wuxuu leeyahay waxa isaga ama iyadu rabto marka ay timaado dhar-goyska. Kuwa doonaya in ay la soo baxaan shaatigadoodu, jaceylka jaceylku waa mid ka mid ah naqshadaha ay isticmaali karaan.
Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in ay jiraan naqshado kala duwan oo la isku qurxiyo, tattoo baashaalku wuxuu noqday mid caan ku ah dunida oo dhan. Farqigu waa qabow oo naqshaduhu waa wax kaliya oo xubnaha xubnaha ka tirsani ay si fudud ula xiriiri karaan.
19. Tattoo super dharka
Sameynta qaabka sawirada midabtakaca saxda ah si aad u muujin karto imtixaan aan caadi ahayn. Tani waa sababta oo ah faahfaahinta qarsoodiga ah iyo meelaynta ee lagu helo markaad raadineyso naqshadda saxda ah ee saxda ah.
20. Tattoo Lady
Sawirada quruxda badani waxay u baahan tahay xirfad of tattooist. Markaad diyaar u noqoto tattoo, waxaad u baahan tahay inaad la fadhiisatid tattooistahaaga oo samee habdhaqanka habboon ee kaa dhigi doona isbeddelka guud ee dhammaadka maalinta.
21. Ku dhaji tattoo vintage vintage
Taabashadu waxay ku imaanaysaa qaabab kala duwan iyo muhiima. Naqshadda qashin-qubka ayaa la heli karaa oo keliya meelo dhif ah iyo haddii aad raadineyso tattoo naadir ah.
22. Tattoo-ga qoyska
Tattoo-ga qoyska ayaa noqday mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu barbardhigo tattoosyada kale. Sababtu waa sababta oo ah xirmooyinka badan iyo dareenka tattoo.
23. Tattoo-baarka caadiga ah
24. Naqshadeynta quruxda gabadha quruxda badan
Ma jeceshahay tattoo this? Waa kuwa kaliya ee raadinaya tattoosyo cajiib ah oo u codsan kara arrintan. Mudanayaasha lama tagin marka ay timaado taatuugaan qurux badan.
sawirada malaa'igtaTattoos Wadnahatattoos sleevetaraagada kubbaddatattoo dheemantattoosTattoo Feathertattoo indhahatattoo maroodigaJoomatari Tattoostattoos qorraxdagadaal u laaboTattoo infinitytattoos qabaa'ilkawaxay jecel yihiin tattoostattoos gacantatattoos cagtaTartoo ubax badanku dhaji tattoosgaraacista gacmahatattoo biyo ahlibto libaaxsawirada gabdhahatattoos qoortatattoos saaxiib saxa ahsawirrada raggahenna tattooshaatiinka shiidanmuusikada muusikadanaqshadeynta mehndilammaanahatattoos ubaxtattoo tilmaantattoos eagletattoos qosol lehwaxaa la dhajiyay tattoosDhaqdhaqaaqashimbir shimbirarrow Tattoolaabto laabtatattoos taajkiikoi kalluunkatattoo ah octopussawir gacmeedtattoos iskutallaabtajimicsiga bisadahacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahfikradaha tattootattoos moonTilmaamta jaalaha ah